के साँच्चै आउँछ त एयर एम्बुलेन्स ? - Nayapul Online
रोगी तथा दुर्घटनामा घाइते भएकाहरुको आपतकालिन उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याउन परेमा एम्बुलेन्सको प्रयोग गरिन्छ । तर, एम्बुलेन्सको पहुँच सबैतिर छैन । एक त देशका सबै भेग सडक सञ्जालले जोडेको छैन । अर्कोतिर पायक पर्ने स्थानमा अस्पताल छैन । यस्तो अवस्थामा विकट क्षेत्रमा एम्बुलेन्सको उपयोगिता प्रभावकारी भइरहेको छैन ।
यदि कुनै दुर्गम भेगका बिरामीलाई तुरुन्त अस्पताल ल्याउनु पर्ने अवस्था आएमा के गर्ने ? कुनै दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्काल उपचार सेवा दिने के गर्ने ? यसको जवाफ छैन हामीसँग । किनभने यति छिटो र छरितो ढंगले बिरामी तथा घाइतेलाई उपचार सेवा दिने संयन्त्र हामीसँग छैन । अर्कोतिर त्यस्ता बिरामी, घाइतेलाई अस्पतालसम्म ल्याउने एम्बुलेन्स सबैतिर उपलब्ध छैन ।
विकल्पः एयर एम्बुलेन्स
जहाँ एम्बुलेन्स सेवा पुगेको छैन वा एम्बुलेन्समा बिरामी/घाइतेलाई ओसार्न सम्भव हुन्न, त्यस्ता क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसो त एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि हुँदै आएको छ । यद्यपी उक्त सेवा सञ्चालनमा आएको छैन ।
सरकारले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको आपतकालिन उद्दारका लागि एयर एम्बुलेन्सको प्रवन्ध मिलाउने जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा‍. युवराज खतिवडाले ग्रामीण तथा दुर्गमा क्षेत्रमा जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको आपतकालीन उद्दारका लागि एयर एम्बुलेन्सको प्रवन्ध मिलाउने जनाएका छन् ।
नेपालमा एयर एम्बुलेन्सको चर्चा चलेको लामो समय वितिसक्दा पनि सरकारी स्तरमा भने एयर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
के अब एयर एम्बुलेन्स आउँछ ?
एयर एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नकै लागि स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीकै पालामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँचै विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरुलाई ५०/५० लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो । तर बजेटको बाँडफाट, अधिकार प्रत्यायोजन तथा अर्थ मन्त्रालयको असहयोग कारण त्यसबेला मध्यपश्चिमाञ्चल तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले मात्र उक्त रकम उपयोग गरेको थियो ।
त्यसपछि एयर एम्बुलेन्सका कुरा त्यत्तिकै हराएकोमा स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा एयर एम्बुलेन्सले पुनः चर्चा पायो ।
एयर एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीकै पालामा क्षेत्रीय निर्देशनालयहरुलाई ५०/५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्नुका साथै सरकारी स्तरमै एयर एम्बुलेन्स खरीद गर्ने अवधारणा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेको थियो ।
तर सरकारी स्तरमा एयर एम्बुलेन्स खरीद गर्दा त्यसको व्यवस्थापन तथा अपरेशन खर्च मंहगो पर्ने भएपछि सरकारले टेण्डर प्रक्रिया मार्फत एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको थियो ।
देवघाटमा माघे संंक्रान्ति मेला सुरु
कोटेश्वर बहुमुखि क्याम्पसको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न